Izihlahla ezinamafutha ekwindla
Insimu idinga ukunakekelwa okuqhubekayo, okungekho kuphela ukuchelela, ukusika izihlahla kanye nokugqoka okuphezulu, kodwa nokuzivikela emiphumeleni emibi yemvelo nama-parasites, okungukuthi, ukugcoba okumhlophe kwezihlahla ezine-lime.
Kungani ama-bleach trunks?
Uma uqala ukwenza insimu maduzane, ke umbuzo othi kungani izihlahla zihlanjululwa, zivela ngokwemvelo. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani le nqubo ingabhekwa njengadingekile:
Ngenxa yezinguquko zokushisa zonyaka, imimoya nemvula, imifino yezihlahla ingonakaliswa, futhi ama-bacterium e-pathogenic, isikhunta kanye nezinambuzane ezinambuzane zizohlala ezikhungweni. Ukwehliswa komzimba ukuvimbela lemiphumela emibi, ngoba inqamule izifo;
umbala omhlophe ubonisa imisebe yelanga kahle, ngakho-ke ipende le-whitewash iwavikela ekushoneni kwelanga esikhathini lapho bengenaso isikhathi sokumboza amaqabunga, futhi ilanga selivele livutha;
Uma i-whitewash yezihlahla ihlanganisa izinto ezikhethekile ezimnandi ekubunjweni kwayo, kuzosiza ukugcina izihlahla kusukela ekuhlaselweni kwentwasahlobo yamagundane.
Nini ukugcoba izihlahla zegadi?
Kunconywa ukuba imhlophe imithi okungenani kabili ngonyaka: ekwindla, emva kokuba izihlahla zilahlile wonke amaqabunga, kanti futhi entwasahlobo, ngemuva kokuqhakaza amaqabunga. Ukuze ugweme ukushisa kwelanga, ngeke kube buhlungu ukuvuselela umhlophe wemithi kanye namagatsha aphansi kusukela eningizimu nasebusika, ngesikhathi se-thaws eqinile.
Nini ukugcoba izihlahla ekwindla?
Isikhathi esiphezulu sezihlahla ezimhlophe ekwindla sekupheleni kuka-Okthoba - Novemba, lapho amaqabunga esewile kakade, kanti iqhwa lingakafiki. Ngenkambiso kungcono ukhethe usuku oludutshulwa ngezinga lokushisa lomoya ka-2-3 ° C. ukuhlanza izihlahla ngesikhathi esifanayo kuzovikela izihlahla kanye namagatsha kusuka emonakalweni yomshini, futhi kuvimbela icing, okuyingozi kakhulu izitshalo ezithisa ukushisa.
Ziyini iziqu zemithi ephuma?
Uma izindlela kanye namathuba avumela, kungcono ukugcoba izihlahla ngepende elikhethekile elisekelwe ngamanzi, elinamakhemikhali, kanti futhi aliphazamisi ukuphefumula kwezihlahla. Kodwa uma kunezinhlobo eziningi zezihlahla engadini, ingaba yindleko enkulu ngokwezezimali, ngoba ukusetshenziswa kokubunjwa kukhulu kakhulu, ngoba kuningi okudingekayo ukuba kutholakale izigqoko ezimhlophe ezine-3-4 cm emhlabathini, kanye namagatsha omzimba. Ngaphezu kwalokho, lo peyinti ukhulu kakhulu, okwenza uhlelo lwawo lube ludleko ngokuhambisana nesikhathi nomzamo.
Ungenza isisombululo semhlophe, okuyinto okudingayo ukuxuba izingxenye ezilandelayo:
i-lime - 2.5 kg - i-pigment component;
i-joinery glue - ukuze ugcine ubumbano bungcono;
I-Vitriol ye-Copper - 0.5 kg njengesifo sokubulala amagciwane;
amanzi - amalitha ayi-10.
Zonke izingxenye kumele zixutshwe futhi zishiywe ukuma amahora ambalwa ukuze zichithe. Lesi yisibonelo esisodwa, kunezindlela eziningi zokupheka zokuxazulula izimpande ezimhlophe, okwakhiwa kuzohluka. Yonke insimu ekugcineni ikhetha lowo ofanelekayo, noma kunjalo, ayihlanganisi i- mullein noma ubumba kuyo - iyancibilika kalula emanzini futhi igeze emvula yokuqala.
Ngaphambi kokuba uqhubeke ngqo emhlophe, kufanele ususe amagxolo avela ezindaweni ezihambisana necrotic, lichen and moss. Lokhu kungenziwa nge-brush yocingo noma isikhala esikhethekile. Isigaba esilandelayo kufanele kube ukuchithwa kwe-cortex - ngaleyo njongo isisombululo sethusi sulfate noma amalungiselelo akhethekile aqukethe ithusi okufanele asetshenziswe. Khona-ke kuyadingeka ukulungisa amanxeba ebusweni be-trunk, etholakala ngenxa yokuhlanza noma kwakhiwa ekuqaleni. Ukuze wenze lokhu, ungathatha ibhokisi lokuxoxa ngobumba, ingadi var noma unamathisele okhethekile. Kuphela emva kokuphothulwa kwazo zonke izinqubo ezingenhla ungakwazi ukuqhubeka nokumhlophe kwemithi.
Izifo zama-orchid kanye nokwelashwa kwazo
Ukukhiqizwa kwe-petunia nge-cuttings
Izinhlobo izaqathe zokugcina ubusika
Izithombo zokugcina zokuhlala ehlobo
Badan - ukufika nokukhathalela
Ukuhlobisa efasiteleni - izimfihlo ezilula zokukhula
Imibhede yemifino eminingi
I-pepper ekhulayo emhlabathini ovulekile
Borago - ikhukhamba utshani
Zingaki izikhathi inja eveza izithelo?
Pear "Cathedral" - incazelo ezihlukahlukene
Ukucubungula amazambane ngaphambi kokutshala
Amabhentshi enkuni yiwona mqondo omuhle wokusiza infield
I-hedgerow evela ku-barberry
Indlela yokuthola i-grease ekhanda?
Amakamelo Okuphila Okuvamile
Imidlalo yama-Didactic eqenjini elilungiselelayo
Yini engingazibandakanya kuyo?
Ukungena kuzinja - izimpawu
Indlela yokusebenzisa akvagrunt?
Indlu yangasese ikhombisa
Ukuphungula ingane uma ukhwehlela
Isaladi yasemaphandleni - iresiphi
Ipulazi uDonna Karan
I-protein cocktail ekhaya
Ungayifaka kanjani indlela yokubamba?
I-colic ye-Biliary iyisimo esiphuthumayo
Ukubuyiselwa komjikelezo ngemuva kokubeletha
Amaphiko ezinamaphiko ngezandla zabo siqu
Inkukhu isitshalo seqanda
Kungani ukushisa indlebe yesokunxele kusihlwa?
Insimbi yensimbi yama-wafers amancane